समाजवादको परिष्कृत रुप नै राजनीति हो : पुरू खनाल – Chitwan Post
समाजवादको परिष्कृत रुप नै राजनीति हो : पुरू खनाल
प्रकाशित मिति: आइतवार, असार २२, २०७६
रत्ननगर नगरपालिका ३ शान्तिचोकका ४२ वर्षीय पुरू खनाल ‘अब्बल’ नेकपाका स्थानीय युवा नेता हुन् । विसं २०५१ सालमा शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसमा मसालबाट प्रतिनिधित्व गरी विद्यार्थी राजनीतिक यात्रा सुरू गरेका उनले माओवादी जनयुद्धका क्रममा ६ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका थिए । परिवार नै राजनीतिमा सक्रिय रहेकाले उनमा चार कक्षा पढ्दादेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव रह्योे । प्रातःस्मरणीय खुसीराम पाख्रिनलगायतका जनसांस्कृतिक कलाकारसँग लामो समय संगत गर्ने मौका पाएका उनी जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत् समाजमा क्रान्तिको बिगुल फुक्ने अभियानमा सक्रिय रहे । उनलाई राजनीतिमा प्रेरित गर्ने पात्र पनि पाख्रिन नै थिए ।
राजनीति र समाजसेवा एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित रहेको बताउने उनी नेपालमा राजनीतिक चिन्तनको कमीका कारण राजनीतिप्रति आमबुझाइ नकारात्मक हुँदै गएको बताउँछन् । एक सफल व्यवसायीको पहिचान बनाएका खनाल राजनीतिमा ‘एक व्यक्ति : एक पद’को अवधारणाको पक्षपाती हुन् । उनी राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका नगर अध्यक्ष, ह्चाचरी उद्योग संघ चितवनका सहसचिव, कुखुरा व्यवसायी संघ चितवनका सचिव, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्यलगायत विभिन्न संघसंस्थामा रहेर काम गर्दै आएका छन् । इच्छाशक्ति भए व्यापार व्यवसायमा लागेर पनि राजनीतिमा योगदान दिन सकिने उनको बुझाइ छ । नेपालमा माओवादी जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनको उपलब्धिका कारण जनता अधिकारसम्पन्न र गाउँगाउँमा विकासको अनुभूति हुन थालेकोले देशमा आर्थिक समृद्धि हुँदै साम्यवादसम्मको गन्तव्यमा पुग्न सकिने विश्वास लिएका युवा नेता खनालसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा चितवन पोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको संवाद–
१) स्थानीय निर्वाचनमा तपाईं स्वयम् पनि रत्ननगर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट मेयरका प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिका कामकारबाहीप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–जनप्रतिनिधिले जुन हिसावले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएकाले जनताको आशा र अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक नै थियो । तर, एकैचोटी अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन पनि सक्दैन । उहाँहरु भर्खर दुईचार पाइला हिँड्दै हुनुहुन्छ । अहिले नै शंकाको नजरले हेरिहाल्नु पनि उचित हुँदैन । जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने तत्परताचाहिँ उहाँहरुले देखाउनु भएको छ । सबै जनप्रतिनिधिलाई एउटै कसीमा राखेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन । कामकारबाहीको रफ्तार हेर्दा भने हुने विरुवाको चिल्लो पातको लक्षण भने देखिएको छैन ।
२) नगरभित्रका समस्या के देख्नुभएको छ ?
–मैले खासै ठूलो समस्या देख्दिन । जनताले असाध्यै ठूलो अपेक्षा गरेको पनि मैले पाएको छैन । यस नगरमा सबैको जीवनशैली चल्नै नसक्ने अवस्थाको पनि देखिँदैन । हो यहाँ ९ हजारको संख्यामा थारु समुदायका आदिवासी र ५ हजार सुकुमबासी छन् । सुकुमबासी समस्या नै यहाँको प्रमुख समस्या हो । सुकुमबासी, आदिवासी थारु र मुसहरलगायतका पिछडिएका समुदायको आयआर्जन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखेको छु । समृद्ध रत्ननगर बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कमजोर समुदायलक्षित कार्यक्रम गरेपछि समग्रमा शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएपछि नगर आफैँ समृद्ध हुन्छ ।
३) अहिले तीन तहको सरकार छ । तर, जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । यसमा के समस्या देख्नुहुन्छ ?
–जनताले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेका छन् । २५० वर्षे एकल शासनको अन्त्य भई जनअधिकार गाउँगाउँमा पुगेको अवस्था छ । एउटा सिफारिस बनाउन पनि दिन खर्चिनुपर्ने झन्झट हटेको छ । स्थानीय तहलाई यति अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ कि अब कोही पनि सिंहदरबार धाइरहनुपर्दैन । तीनतहको सरकारले जनतालाई केही न केही पक्कै दिएको छ । प्रत्येक वडामा दुई करोड बराबरको बजेट आउने स्थिति अहिले छ । विकेन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अभ्यास हुँदैछ । संघीयता पहिलोपटक कार्यान्वयन हुँदैछ । त्यसमा समस्या र चुनौती दुवै छ । सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारबीच पुलको काम गरिरहेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्ख र हेरको नीति लिएको कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका खोजीरहेको छ । अहिलेको राज्यसत्ता प्रणालीमा अलि बढी चुनौती रहेकाले यस्तो देखिएको हो । तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुनैपर्छ नभए उल्टो परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । यसमा सरकारबीच इमान्दारिता र आआफ्नो अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए समग्र देश विकासको गति तीव्ररुपमा हुनसक्छ ।
४) तपाईंको पार्टी नेकपा दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा छ । सरकार आलोचना÷विरोध सुन्नै नचाहने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । किन यसो भएकोे होला ?
–म एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले सरकारबारे विमर्श गर्न चाहन्छु । हामीले अहिले जुन परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छौँ, नागरिक अधिकार गाउँगाउँमा स्थापित भएको छ, यो चानचुने उपलब्धि होइन । यसका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी पहिलोपटक कम्युनिस्टको स्थिर सरकार स्थापना हुँदा केही दम्भ देखिनु अस्वाभाविक होइन । तर जब उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै विविध चुनौतीहरुलाई पन्छाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिवादी चिन्तन हावी हुन पुग्यो, जस कारण केही गर्न खोज्दाखोज्दै र चाहँदाचाहँदै पनि सरकार पछाडि हट्नुप¥यो । नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वभाव र मनोविज्ञान हेर्दा केही काम गर्नुपूर्व अभ्यासको कमी देखियो । पर्याप्त छलफल तथा रायसुझाव लिएर अघि बढ्न नसक्दा दुईतिहाइ बहुमत भएर पनि निरीह बन्नुपर्ने अवस्था देखियो । सरकारले आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा पछाडि हटेको पनि छ । कतिपय आलोचनाले सही माग निर्देश हुनसक्ने भएकाले सरकार एक्लै अघि बढ्नुहुँदैन ।
५) राजनीति अहिले एउटा पेसाजस्तो बनिरहेको छ, राजनीति किन गर्ने र कसरी गर्ने ?
– राजनीतिलाई पेसाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएका कारण राजनीतिप्रति आम मानिसको बुुझाइ जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो भइरहेको छैन । समाज रुपान्तरणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने, देश र अन्तर्देशीय सम्बन्ध फराकिलो बनाउन योगदान गर्ने राजनीतिज्ञले नै हो । देश विकास र समृद्धिका लागि उत्कृष्ट राजनीतिज्ञकै जरुरत पर्छ । अहिले राजनीतिलाई जोजसले पेसा बनाएका छन्, ती राजनीतिज्ञ नै होइनन् । भीड जम्मा गरेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न चाहने अवसरवादीमात्रै हुन् । राजनीतिको अर्थ निकै गहन छ । केही व्यक्तिले राजनीतिको अन्तर्वस्तु र गम्भीरतालाई बुझ्दै नबुझी हल्कारुपमा लिने गरेको पाइन्छ । पैसा खर्चेर माला लगाउँदैमा कोही राजनीतिज्ञ बन्दैन । राजनीतिज्ञले जहिले पनि आफ्नो भूमिका के हो, चिन्तन के हो, समुदायप्रति जिम्मेवारी के हो भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । पदमा रहँदा या नरहँदा समाज रुपान्तरणको भावना राजनीति गर्ने व्यक्तिमा हुनुपर्छ । आम नागरिकको मनमुटुमा रहेर दुःखसुखमा साथ दिएर उनीहरुको भावना बुझ्न सकियो भने त्यही हो असल राजनीति ।
६) तपाई एउटा समाजसेवीका रुपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । समाजसेवा र राजनीतिबीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
–राजनीति भनेकै समाजसेवा हो । समाजसेवाबाटै राजनीति सुरु हुन्छ । सही चिन्तनका साथ समाज रुपान्तरण गर्नु नै राजनीति हो । समाजवाद एउटा चिन्तनमात्रै हो । हामीले गर्ने व्यवहार, समानता, समावेशिता, एकअर्कोको अस्तित्व स्वीकार, जनताको आधारभूत आवश्यकतासँगै उत्कृष्ट जीवन बिताउने चिन्तन नै समाजवाद हो । समाजवाद हुँदै साम्यवादको गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि राजनीति गर्ने हो । समाजवादको परिष्कृत रुप नै राजनीति भएकाले निस्वार्थ भावका साथ सामाजिक उत्पीडनका विरुद्ध राजनीति गरिनुपर्छ ।
७) नेपाली राजनीतिमा अघि बढ्न युवाले नेताकै चाकडी गर्नुपर्ने वा कुनै गुटको पक्षपोषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसमा तपाईंको अनुभव के छ ?
–राजनीतिमा अहिले यस्तो देखिएको छ । यो गलत संस्कार हो । निस्वार्थ ढंगले अघि बढ्छु, समाजलाई रुपान्तरण गरेर आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउँछु भन्ने पनि नभएका होइनन् । राजनीति गर्नेले आफैँमा परीक्षित गर्दै समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण अहिले नेपाली राजनीतिमा विभिन्न गुट÷उपगुट देखिएको हो । व्यक्तिवादी चिन्तन र अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्ने परिपाटी नहुँदा विश्वासको संकट देखिएको हो । हामी समाजवादी बाटोतर्फ अघि बढिसकेपछि यस्ता समस्या हट्ने विश्वास लिएको छु । साम्यवादको मार्गमा अघि बढ्दै गर्दा गुटको राजनीति पनि अन्त्य हुन्छ, हुनुपर्छ ।
८) नेकपाभित्र पार्टी एकता लगभग टुंगिसके पनि स्थानीय कार्यकर्तामा भावनात्मक एकता भएको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा भागबन्डा र जिम्मेवारी हेरफेरमा असन्तुष्टि बढिरहेका छन् । यो अवस्थामा कसरी साम्यवादको सपना पूरा हुनसक्छ ?
–फरक पार्टीका रुपमा समाजवादी क्रान्ति गर्दै आए पनि एमाले र माओवादीको निर्दिष्ट लक्ष्य समान छ । दुई वटा सोचलाई फ्युजन गरी नेकपा बनेको हो । यसमा एकैचोटी भावनात्मक एकता भइहाल्दैन । विचार र सिद्धान्त एउटै भएपछि अब अग्रगामी ढंगले नेकपाका कार्यकर्ता अघि बढ्नुपर्छ, यसको विकल्प पनि छैन । समयक्रमले एउटै गन्तव्यमा पुग्न एकता भएको कुरालाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी हेरफेर र भागबन्डाको कुरा त्यति महŒवपूर्ण होइन, समान गन्तव्यको यात्रामा अघि बढ्ने संकल्प बोकिसकेपछि झिनामसिना मुद्दामा अल्झिनु पनि हुँदैन । साम्यवादको यात्रामा समयक्रमसँगै कार्यकर्ताहरु एउटै भावनामा विलिन भएर जान्छन्, यसमा समस्या मैले देखेको छैन ।
९) त्यसो भए निषेधको राजनीतिचाहिँ किन हावी भइरहेको छ त ?
–हिँड्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । पार्टीभित्रको अन्तर्संघर्षले समाजमा केही प्रभाव पार्दैन । निषेधको राजनीति भने क्षणिक हुन्छ । यस्ता सानातिना विषयले ठूलो महŒव राख्दैन । हाम्रो सोच र उद्देश्य महासागरमा पुग्ने हो । सबैले एउटै बाटो हिँड्नपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । फरकफरक नदीखोला हुँदै गए पनि अन्ततः मिल्ने महासागरमा नै हो । व्यक्तिवादका कारण निषेधको राजनीति हावी भएको जस्तो देखिए पनि समाधान खोज्न समस्या छैन ।
१०) तपाईं स्थानीय युवा नेताका हैसियतले स्थानीय तहमा बढेका भ्रष्टाचारबारे के भन्नुहुन्छ ?
–यो भ्रष्टाचार भन्ने रोग विश्वव्यापी समस्या हो । यो कसैले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय पनि छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएको पनि छ । अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ भने विकास निर्माणका काम पनि भइरहेका छन् । राज्यको पुनर्संरचनाअनुसार स्थानीय तहको सरकारले काम गरेको दुई वर्षमात्रै भएको छ । दुई वर्षमै कायापलट केही हुने भन्ने होइन । अहिले गाउँगाउँमा विकासका गतिविधि पनि बढेकाले अनियमितता पनि बढेका छन् । स्थानीय तहमा देखिएका कमीकमजोरी केलाउने, खबरदारी गर्ने नीति राज्यले बनाउनुपर्छ । राज्यको नीति बलियो भयो र कानुन कार्यान्वयन हुन सक्यो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट सरकारले ल्याउनुपर्ने भनेकै विधिको शासन र सुशासन हो । यसका लागि केही समय लाग्छ ।
११) तपाईं सफल व्यवसायीका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ, अहिले उद्योगी व्यवसायीका समस्याचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
–देश समुन्नत भयो भने मात्र उद्योगी व्यवसायीका सुदिन सुरू हुन्छन् । अब बन्द, हड्ताल सधैँका लागि बन्द हुनुपर्छ । शान्ति र सुरक्षा भए व्यवसायीहरु ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । देशमा दसवर्षे अर्थपूर्ण जनयुद्ध भयो । जनयुद्धको अवस्थामा चिन्ताजनक अवस्थालाई चिर्दै व्यवसायीहरु यहाँसम्म आए भने अहिले त अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले व्यवसायीले चाहेकै स्थायी शान्ति हो । यति भइसकेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अतुलनीय भूमिका खेल्न सक्छन् । पछिल्लो समय आमनागरिकमा पनि खर्च गर्ने क्षमता, तत्परता बढेको देखिन्छ । शान्ति र सुशासनमात्र भइदिने हो भने सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारा सार्थक हुन धेरै समय लाग्दैन ।